GeoGebra: Fampiharana matematika ho an'ny fanabeazana amin'ny ambaratonga rehetra | Avy amin'ny Linux
GeoGebra: Fampiharana matematika ho an'ny fanabeazana amin'ny ambaratonga rehetra
Amin'izao fotoana ankehitriny izao, indrindra mandritra ny Valan'aretina covid-19, izay Dingana fampianarana sy fianarana mitaky fampiharana na sehatra, aleo malalaka, misokatra ary / na maimaim-poana hanamorana sy hanohizana azy ireo, misy antso ho an'ireo liana GeoGebra.
Ny fampiharana Free Software GeoGebra, mifantoka amin'ny faritra matematika, indrindra ho an'ny sehatra fampianarana amin'ny ambaratonga rehetra, satria manome fitaovana sy fiasa ho an'ny taranja arithmetika, géometrija, algebra, calculus ary famakafakanaanisan'izany ny loharanom-pahalalana statistika.
Taona maro lasa izay, naneho hevitra izahay GeoGebra ao amin'ny Blog. Ary tamin'izay dia naneho hevitra momba izao manaraka izao izahay:
"GeoGebra dia programa geometriika mavitrika, izay midika fa miaraka aminy isika dia afaka mamorona fanamboarana avy amin'ny teboka, fizarana, tsipika sns. ary velomina izy ireo hamerina endrika ara-jeometrika samihafa ary amin'izay hianatra tsara kokoa na hampianatra tsara kokoa ireo hevitra tiana. Saingy tsy mijanona fotsiny eo; koa mitantana ny calcul sy algebra ao anatin'ny tontolo mavitrika".
1 Momba ny GeoGebra
2 GeoGebra: Manolotra fampiharana matematika marobe
2.1.1 Avy amin'ny Repositories
2.1.2 Avy amin'ny Internet (Misy ny kinova farany - 5 sy 6)
Momba ny GeoGebra
Na izany aza, anio, ao amin'ny Momba ny fizarana GeoGebra an'ny azy tranokala ofisialy nofaritana toy ny:
"GeoGebra dia rindrambaiko matematika ho an'ny ambaratonga fanabeazana rehetra. Mampivondrona ny haitao, ny algebra, ny statistika ary ny calcul ho lasa firaketana an-tsary sy an-tserasera ary apetraka amin'ny tabilao. GeoGebra, miaraka amin'ny fahaizany mampiasa malalaka, dia mampivondrona vondrom-piarahamonina iray lehibe sy mitombo.
Maneran-tany, mpankafy an-tapitrisany maro no mandray azy ity ary mizara ny endrika sy ny fampiharana GeoGebra. Omeo hery ny fianarana. Mampifanaraka ny andrana sy ny fomba fiasa hiaina fikambanana didaktika sy fifehezana miampita matematika, siansa, injeniera ary teknolojia (STEM: Science Technology Engineering & Matematika). Ny vondrom-piarahamonina mivondrona dia manitatra azy io ho loharanom-pahalalana manerantany, mahery sy manavao ho an'ny fanontaniana manan-danja sy mahazatra amin'ny fampianarana sy fianarana! ”.
GeoGebra: Manolotra fampiharana matematika marobe
Amin'izao fotoana izao, GeoGebra misy amin'ny ankamaroany Repositories an'ny fizarana GNU / Linux, na dia koa, azo antoka fa ny kinova ambany kokoa noho ny kinova 5 na 6, izay azo sintonina avy amin'ny Fizarana fampidinana tranokalan'izy ireo.
Na izany aza, GeoGebra ilaina io rindranasa apike, izany hoe, karazana isan-karazany Hardware (Solosaina, solosaina finday, takelaka ary finday) ary Rafitra miasa (Windows, Mac, Linux, Android, iOS). Ho fanampin'izany, azo ampiasaina mivantana avy amin'ny a Web browser, avy amin'ny tranonkala ofisialiny. Ho fanampin'izany, azo alaina ao amin'ny Fiteny maro, ary misy fitaovana matanjaka mifanaraka amin'ny a interface tsara intuitive sy mailaka.
Avy amin'ny Repositories
Ity baiko manaraka ity ihany no tokony hatao:
Avy amin'ny Internet (Misy ny kinova farany - 5 sy 6)
Raha vao sintonina ary esorina, ohatra, ny rakitra loharano 6, izay antsoina hoe «GeoGebra-Linux64-Portable-6-0-579-0»Ny fampiharana azo ekena antsoina dia tsy maintsy tanterahina amin'ny alàlan'ny Terminal (Console) "GeoGebra", toy ny mpampiasa faka sy ny safidy "--no-sandbox" raha ilaina izany.
Amin'ireto baiko baiko ireto ihany, ny rohy mivantana dia azo noforonina (fidirana mivantana ao amin'ny menio) mba hanatanterahana azy amin'ny sary. Ho an'ny ambiny, dia mitoetra ihany ny fampiasana azy io sy mankafy ny mety ho fanabeazana an'ity fitaovana ity.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny Fampiharana rindrambaiko maimaim-poana «GeoGebra», izay ifantohana faritra matematika, indrindra ho an'ny sehatra fampianarana amin'ny ambaratonga rehetra, satria manome fitaovana sy fiasa ho an'ny taranja «aritmética, geometría, álgebra, cálculo y análisis»anisan'izany ny loharanom-pahalalana statistika; be be fahalianana sy fampiasana, Ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » GeoGebra: Fampiharana matematika ho an'ny fanabeazana amin'ny ambaratonga rehetra
Dism ++: Misokatra fisoratana anarana ho an'ny DISM GUI